Xildhibaan cabdirisaaq Cumar “Safarkeennii Magaalada Beledweyne waa la siyaasadeeyay” – Kalfadhi
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo xasan Sheekh Maxamuud, ayaa shalay gaaray magaalada Beledwyne, waxaana soo baxay warar sheegaya in shalay la isku dayay in la joojiyo safarka wafdiga, sida ay sheegeen.
Wafdiga ayaa markii dambe ka degay magaalada baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan, xubnaha wafdigaasi waxaa ka mid ahaa Xildhibaan cabdirisaaq Cumar Maxamed oo sheegay in safarkooda la siyaasadeeyey sababtuna ay ahayd Ra’iisul wasaaraha oo isna maanta Baladweyne ku socday.
Dhinaca kale shir jaraa’id oo uu magaalada Muqdisho ku qabtay Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeele Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay inaysan jirin cid safar laga hor istaagay balse ujeedku ahaa garoonka baladweyne oo ay biyo fadhiyeen kadib roobab halkaasi ka da’ay.
Waxa uuna sheegay inay la xisbaatami doonaan Shirkadda leh diyaaraddii maanta ka degtay garoonka diyaaradaha Beledweyne, isagoo ku eedeeyay inay sameysay mas’uuliyad darro, ayna qaadatay riski sida uu yiri.
“Go’aanka diyaaradaha ee dhulka ma lahan duuliyaha, waxaa is la keh hey’adaha u xil saaran oo ka warami karo shirkadaas leh diyaaradah waxay ku xadgudubtay xirfadii duulimaadyada waqtigeeda kala xaali doonaan waana la xisaabtami doonaa”ayuu yiri Madaxweyne Waare oo intaa ku daray in diyaaradaas ay walwal badan gelisay.
Waxaa uu sheegay in shalay 6-dii subaxnimo lala wadaagay in garoonka aan lagu degi karin, maadaama 600mitir oo dhulka diyaaradaha ku degaan uu biyo dhigay roobab xalay da’ay, isla markaana aysan diyaaradaha ku degi karin, gaar ahaan diyaaradaha nooca Focker 50.
Baarlamaanka Jubbaland oo ballan-qaaday lacago tabarucaad ah oo ay ugu deeqayaan dadkii ay saameyeen fatahaadaha